Edwin Van Der Hoeven - Ntụgharị uche, Nnukwu nkọ, Ọgba
"Ihe dum kariri nchikota nke uzo ya"
AKW SKWỌ AHENR S
Were ule ma chọpụta n'onwe gị
Ntụgharị uche & uche
Download ihe omume (n'efu) ma nweta n'onwe gi
Ọganihu nke Onwe
Kedu ihe na-egbochi gị imezu nrọ gị?
NKWUPUTA Onwe na ihe okike
Chọpụta asụsụ mkpụrụ obi gị na-asụ
Nkwurịta okwu na ụwa a na-adịghị ahụ anya
Enwere m olileanya na ịchọta ihe ị na-achọ na saịtị a. Enwere ike ịtọ ya ntakịrị karịa ka ị tụrụ anya ma ọ bụ jiri ya site n'aka onye na-ajụ ma ọ bụ onye nchịkwa. Ekwenyeghị m na itinye okpu na-ekwu na m bụ onye na-ajụ ase ugbu a wee mezie onye na-anụ ọkụ n'obi ọzọ. Ihe niile jikọtara ọnụ ma ana m enweta mmụọ sitere na ndụ niile.
M na-ahụkwa nke a na ndị sonyere na enyere m aka iduzi esemokwu na ndụ ha. Ha na-arụ ọrụ na X mana achọpụta na Y kwesịrị ka elebara anya. Onyinye nke ahụ bụ na ha na-enweta nsonaazụ dị mma n'akụkụ niile nke ndụ ha. Ma ọ dabara adaba! Onweghị ihe dị iche na ibe ya yabụ foto zuru oke dị mkpa. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndụ anyị ga-awa okooko n'uju.
Anyị niile karịrị ngụkọta nke akụkụ ya! Dị ka mmadụ, na mmekọrịta, gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị na ndị ọrụ ibe gị.
Facebook-f LinkedIn Twitter ọkara Pinterest Youtube
ntị site na iTunes
gee ntị na Spotify
ge ntị na Deezer
Plan B - Bitcoin ọdịnihu anyị
Ọnye na-bụ Edwin?
Itationtụgharị uche na Consmara
Basicdị ntụgharị uche 2
Na-atụgharị uche nke ọma na Brainwave Entrainment
Na-atụgharị uche n'ịtụgharị uche nke ọnwa gbazuru agbazu
Mantras si Buddha
Na "Vajra Guru" mantra si Padmasambhava
Chakras 7 nke aru anyi
Ntụgharị uche chakoo nke chakra
Sacral chakra resonance ntụgharị uche
Anyanwụ plexus chakra resonance ntụgharị uche
Obi chakra resonance ntụgharị uche
Ntụgharị uche chakra resonance
Iche echiche nke atọ chakra resonance
Na-atụgharị uche okpueze chakra
Onye nwere mmetuta di elu (HSP)
HSP - Nnukwu mmetụta dị elu
Njirimara 5 nke Onye Nwere Nnukwu Mmetụta
Yoù bụ onye nwere mmetụta miri emi? Were ule hsp
Nnukwu uche na ọrụ
5 talent nke ukwuu ọrụ ọrụ
Detuo ndụmọdụ na-ajụ ase
Nye ihe ngosi site na nghọta doro anya
Ọgwụgwọ, ikwu okwu na nka site na Trance
Edwin van der Hoeven CSNU, onye na-ajụ ndị mmụọ ase
Kpọtụrụ na ọnụego
Edwin van der Hoeven - HSP / nnukwu uche, ọnọdụ ime mmụọ na ajụ
Dika ndi Buddha kwuru: mmadu nile nwere otu ihe na nke bu 'ọchụchọ maka obi ụtọ'. Nkọwa nke obi ụtọ nwere ọtụtụ nkwupụta onye ọ bụla; ọzọ ego, mma anya, a ụtọ ibe, ịga nke ọma, ezi ahụ ike, nnwere onwe, creativity na na.
Nwere ike chọọ obi-ụtọ n’èzí nke onwe gị ma ọ bụ n’ime onwe gị.
Ọtụtụ ndị nọ n'Ebe Ọdịda Anyanwụ focuswa na-elekwasị anya na obi ụtọ n'èzí nke onwe ha, Otú ọ dị, ahụmịhe na-egosi na nke a na-enyekarị afọ ojuju nwa oge na ị ga-amalite ngwa ngwa ịchọ nchịkọta ọzọ. Ọ bụ mgbe ị na-azụlite obi ụtọ ime ka ị nwere steeti nke ịbụ nke ahụ bụ ịhụnanya ma dị ike, na-eme ka uche gị dịrị ma na-enye mmụọ maka ọganiihu onwe gị.
Ana m ahapụrụ gị ọnọdụ gị na mpụga kpamkpam. Ọ ga-amasị m inyere gị aka na obi ụtọ nke obi, na-azụ uche na asụsụ nke mmetụta gị.
Mara ihe? Come bia ebe aka nri ... jiri ịhụnanya, Edwin
Nkuzi nke onwe 85 € / 90min.
You na-abanye n'ihe nwere ọrụ, nwee nsogbu ikwu maka mmetụta gị ma ọ bụ na ịchọrọ nkwado ụfọdụ na mmepe onwe gị ma ọ bụ nke mmụọ gị? M na-enyo enyo, na-akwapụ gị na mpaghara nkasi obi gị ebe ọ dị mkpa ma nyere gị aka ile onwe gị anya n'ụzọ dị mma ma na-ewuli elu.
Ọkara ndụmọdụ 50 € / 45min.
Dịka onye na-ajụ ihe, nke SNU kwadoro, ana m enye ndụmọdụ dabere na ụzọ Bekee. Nke a pụtara na ị gaghị ewetara ihe dịka foto ma ọ bụ ọla. M na-akpọtụrụ onye chọrọ ịgwa okwu site na World Spiritual ma nye nke a ọtụtụ ihe akaebe dị ka o kwere mee iji wepụ obi abụọ ọ bụla.
Ọgwụgwọ mmụọ 20 € / 25min.
Nweta ahụ mmụta nke ọgwụgwọ ime mmụọ maka onwe gị. Otu ọgwụgwọ na-ewe ihe dịka nkeji 25 nke m na-etinye na ụwa ime mmụọ ka m nwee ike ịgafe na ọgwụgwọ.
Ozi banyere ego na ọnụego vind je hier.
Ederede kacha ọhụrụ
Bitcoin na ọnọdụ ime mmụọ nke ịzụ ahịa
Ọnọdụ ime mmụọ na ego metụtara mgbe ụfọdụ ka ha na-emegiderịta onwe ha. Na vidio mbụ a m kọwara na ị nwere ike ịmụ ọtụtụ ihe gbasara onwe gị mgbe ị na-azụ ahịa na ebuka ma ọ bụ crypto. O na akuziri gi banyere ndidi, ilekwasi anya, egwu, atumatu na otutu agwa ndi ozo bara oke uru na ndu gi.
Mmesapụ aka ga-agbapụta n'oge nsogbu
29 Eprel, 2020
Ego yiri mmiri, ọ ghaghi ịsọ asọ n’efu. Madụ bụ naanị sọsọ dị n'ọgba a na-aga n'ihu. Yabụ, zụlite mmesapụ aka ka ị hapụ ikwe ka uwa kere ọrụ ya.
Ezi Okpukpe bu banyere ntụkwasị obi
8 Eprel, 2020
A na-egosipụta ntụkwasị obi n'ọ joyụ nke na-anaghị akwụsị akwụsị na ihe niile dị mma dịka o kwesiri. Ihe niile ị ga - eme ugbu a bụ ịmara banyere ndụ.
Ihe nleghara anya bụ tiketi gị maka ndụ okike
Uche anyị bụ ụzọ anyị ga-esi enweta oge nrịgo nke ịdị elu nke mmụọ na ndụ. Kedu ihe ị na-akụ? Mgbe anyị ji mmụọ anyị elu, ka anyị na-enwe ike ịhazi ndụ anyị. Wayzọ a ị nwere ike iji nghọta gị na-ebi ndụ mara mma na ndụ okike.
Uche siri ike nke ukwuu
You na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ? Mgbe ahụ ụbụrụ gị na-eme ka ihe ọmụma dị omimi karị ma ị na-atụgharịkwu uche na ya. Ahụmịhe mmetụta gị dị ike karị, ihe mgbagwoju anya, ọgba aghara na ị na-enweta ihe ngwa ngwa dịka ọhụụ ma ọ bụ dị iche iche; ị na-akpali akpali site na mkpali karịa nkezi mmadụ.
Are na-achọsi ike na enweghị ndidi
Enwere m mmetụta ma hụ ihe niile, mana gịnị ka ọ pụtara?
Ornye ma ọ bụ ihe bụ HSP?
9 a na-ajụkarị ajụjụ
Mee ule ahụ
Ntughari uche & mmata
Mgbe mmadụ na-ekwu maka mmepe mmụọ mgbe ahụ ntụgharị uche bụ 'steeti nsụhọ'. Ọnọdụ nke nsụhọ n'echiche a gafere ọdịnala ndị na-enye anyị ụzọ iji nweta ya steeti nke ịbụ ibia. Kemgbe ọtụtụ afọ, anaghị m akụzi ọdịnala a kapịrị ọnụ, mana ụzọ iji nweta ọnọdụ ntụgharị uche. Na mgbakwunye, m na-enyere ndị mmadụ aka ịhụ ike dị omimi nke mantras site na-eme mantra nke ha ma ọ bụ site na iji, dịka ọmụmaatụ, the Vajra Guru mantra si Padmasambhava.
Want chọrọ ịmụta ịtụgharị uche? Kwụsị ịnwale!
You maara ma ị na-atụgharị uche n'ụzọ siri ike ma ọ bụ na-atụgharị uche ka ọ bụ na ọ na-esiri gị ike ịnọdụ ala maka minit 15 ma ọ bụ ọkara elekere?
Kedu ihe ị ga - eji tụgharịa uche na ọnwa zuru oke?
10 Jenụwarị, 2020
Ntụgharị uche ọnwa zuru oke na-enye anyị ohere ijikọ onwe gị elu. Mgbe anyị na-enwetakwu ihe na mmetụta anyị na mmetụta anyị na-enweta ohere ịdị.
ntụgharị uche chakra
€4.99 €0.00 Na ịzụ ahịa ịzụ ahịa
€4.99 €2.49 Na ịzụ ahịa ịzụ ahịa
tinye onwe gi na mbu
Gịnị bụ ọhụụ gị, nkà ihe ọmụma gị? Ọrụ gị ọ bụ ihe dị mkpa maka obi ụtọ gị, ụlọ gị, ihe omume ntụrụndụ gị, onye ọlụlụ gị na ndị ezinụlọ gị ka ị na-achọ ahụmịhe ... ọ masịrị gị ịga njem ma ọ masịrị gị ịchọpụta ihe ọhụụ na-aga n'ihu? N’uche m ọ nweghị azịza ziri ezi ma ọ bụ nke ezighi ezi, mana ọ bụ naanị otu azịza ziri ezi; nke gi. Na-ebi nrọ gị? Ma ọ bụ na ị maghị ụzọ na ebe ị ga-amalite. Ma eleghị anya, isiokwu ndị a nwere ike inye gị ụfọdụ mmụọ nsọ ... mmalite.
Mgbe obi abụọ ghara ịchụ ahụ
Kedu ihe ọ ga - ewe iji kwụsị inwe obi abụọ? Legharị anya maka ihe nwere ike inye gị nchekwa. Imechi anya gị na ụwa mpụga gị ma banye. Are bụ naanị onye nwere ike inye gị n'aka na ndụ.
Bilie mgbe ọdịda gị gachara
Tinghapụ ihe gara aga bụ ihe ị ga - eme. Anwakwala anwa ijigide ihe ị na-anaghịzi ejere. Ájá dị n’azụ gị ga-ada ruo mgbe ọ na-eche ka ịkpọlite ​​ya ọzọ. Onweghị ihe ga-adịgide otu, maka onweghị onye, ​​kedu ihe ọ ga - eji dị iche maka gị. Yabụ, ibili ọzọ gaa ije, gaa n'ihu na ndụ gị wee ghara iwe iwe. Mee onwe gị ka obi jọọ gị njọ, mana hụkwa ahụ efe dịka oge ị ga - eji gaa.
Bibie egwu gị!
7 na Mee, 2019
Bibie egwu gị na nnukwu akụ gị na-echere gị. Ọ na-abụkarị nkwụsi ike. Egwu ị na-atụ adịghị anọ na njedebe ikpeazụ!
You chetụla ihe mere i ji biri?
Ọtụtụ mmadụ na-atụ egwu ọnwụ, ya mere na-atụkarị egwu ndụ n'onwe ha. Ha hapụrụ ndụ, kpuo ìsì, na-enwe olileanya na ọrụ ebube ga-eme otu ụbọchị. Na ihe niile ga-aka mma. Ma n'ụzọ dị a ?aa? Ha anaghị ahụ na ha onwe ha bụ ndị chepụtara ndụ ha.
Ọkara bụ ikike sitere n'okike maka nghọta doro anya doro anya nke ị nwere ike iji soro onye nwụrụ anwụ nwee nkwukọrịta. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ >
Akụkọ mmụọ na-eduga na ahụmịhe okwukwe
22 Jenụwarị, 2020	Enweghị nzaghachi
Spiritualwa ime mmụọ nwere ọgụgụ isi ma mara otu esi enweta nlebara anya. Ọ bụghị iji mee ka ị kwenye, kama ime ka nkwenkwe daa nke mere na ị nwere ike imeghe ohere maka ọrụ ebube nke ndụ.
Ọ Joyụ bụ okpukpe!
November 21, 2019	Enweghị nzaghachi
Ọ bụghị 'okpukpe', mana ọ joyụ bụ okpukpe! Amaghi m gbasara gi, mana m zute ezigbo enyi m, o na eme m obi uto.
Edwin bụ Bekee Ndị otu Mmụọ Nsọ (SNU) gbaara ezi àmà maka;
Ihe ngosi ogbugbu
Site n'ike mmụọ nsọ ekwu okwu
ọzụzụ nke ndị na-ajụ ase
Aha ya bu onye nkuzi na CRKBO.
Nzuzo na ikike
Nkwupụta kuki (EU)
Nkwupụta kuki (US)
Anata akwụkwọ akụkọ
© Ejikwala ozi dị na websaịtị a wee lekọta ya anya, agbanyeghị na enwere mgbe enwere ndehie ma ọ bụ ezighi ezi; enweghi ikike inweta ihe a.
mere na ❤ by Uru agbakwunyere - Edwin van der Hoeven
Paykwụ Uniongwọ Union
Pịa akara ngosi a na menu aka nri dị n'elu iji mepee mmapụta a
Gee ntị na ntụgharị uche gị kwa ụbọchị ebe a
Chọta ntụgharị uche a na ANYI ANYI (anyị-e-one.io)
Ọtụtụ ndị nwere n'efu Ntughari okpueze Chakra budata iji tụgharịa uche na n'oge ọnwa zuru ezu. You maara na ọnọdụ ọnwa dị na Chakras? Ma ọ bụ ya mere e nwere 7 dị iche iche resonance na-atụgharị uche, onye kwa Chakra.
Mmapụta a gosipụtara ntụgharị uche metụtara na ọnwa ugbu a.
HSP na ezi uche
Ọhụụ nke ndụ
Mmepe ime mmụọ
Zitere m ozi ndị ọzọ